Home Wararka Gudaha Guddoomiyaha Degmada Buulo Burte ee Gobolka Hiiraan oo ka qaylo dhaamiyay cunno...
Guddoomiyaha Degmada Buulo Burte ee Gobolka Hiiraan oo ka qaylo dhaamiyay cunno la’aan ka jirta Magaaladaas.
Axmed Mahad Nuur, Guddoomiyaha Buulo Burte ayaa sheegay in xaalad adag oo dhanka Nolosha ah ay ka jirto Magaaladaas kaddib markii xoolaha intooda badan baabi’isay Abaarta, halka la waayay dallagii kasoo go’I jiray beeraha.
Guddoomiye Axmed waxa uu intaas ku daray in xaaladdu ay sii darsatay markii Dadka deegaanka ah dulsaar ku noqdeen qoysaska kasoo barakacay Tuulooyinka hoostaga Magaalada Buulo Burte taasina ay sababtay in welwel uu lasoo derso.
Waxa uu sheegay in go’doonka saaran Magaalada Buulo Burte uu sababo cunno yari ka jirtay kahor abaarta sii kororto maadaama Dadkii Magaalada ku sugnaa qoysas aanay ka tiro yareyn ay dulsaar ku noqdeen.
Afar maalin ayuu sheegay Guddoomiye Axmed Mahad in Diyaaradaha ay ka degaan Buulo Burte balse badeecadaha ay qaadaan aanay ku filneyn Dadka, waxa uu xusay in mararka qaar si qarsoodi ah raashin aan badneen Magaalada loo geliyo.
“Abaarta saameyn weyn ayay ku yeelatay Magaaladaas oo muddo go’doonsan, Xoolo dhaqato & Beeraley ayaa degen, macluul badan ayaa ka jirta, Ganacsiga Xooggiisa waxa u ku yimaadaa diyaaradaha oo 4 maalin yimaada, Dadka deegaanka waxaa kusoo barakacay oo dulsaar ku noqday qoysaskii degenaa Tuulooyinka oo Xoolo dhaqato u badan” Guddoomiyaha Buulo Burte Axmed Mahad ayaa sidaasi yiri.
Axmed Mahad, Guddoomiyaha Buulo Burte ayaa Dowladda Cusub ee Madaxweynaha JFS Xasan Sheekh Maxamuud ugu baaqay in ay si gaar ah uga warqabto xaaladda adag oo ay wajahayaan Dadka kunool Magaaladaas.
“Dadka Deegaanka ah oo ahaa Xoolo dhaqato, Beeraley & Xoogsato waxaa joogsaday shaqooyinkaas, Dowladda cusub ee Soomaaliya waxa aan ka sugeynaa in ay wax ka qabata dhibaatooyinka ka jira Buula burte, rajo ayaan ka qabnaa Maadaama Madaxweynaha uu magacaabay Ergay u qaabilsan Gargaarka Bani aadamnimada waxa aan ka codsaneynaa in uu wax ka qabto abaartaan taagan” Ayuu yiri Guddoomiyaha Buulo Burte.
Buulo Burte waxa ay kamid tahay Magaalooyinka Hiiraan ee isugu socodkooda u joogsaday go’doonka Al-Shabaab, waxaa is xig-xigay oo saameyn taban ku reebay Abaarta, Go’doonka saaran iyo dhibaatooyin kale
Previous articleRa’iisul Wasaare Rooble ayaa daah-furay imtixaanka shahaadiga ah
Next articleGalmudug oo sheegtay in dagaalkii Baxdo lagu dilay dagaalyahano Ajnabi ah
Wararkii ugu dambeeyay weerar askar lagu laayay oo ka dhacay Shabeellaha...
Ardayda jaamaca jimma ee deegaanka Oromiya ayaa sameeyay Aalad shidaalka...
2000$ oo dollar qaado , 100 Xabo oo Baranbaro ahna guriga...